No. 2154, Saturday, June 15, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2154, Saturday, June 15, 2019
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၃ ရက် (စနေ၊ ဇွန် ၁၅ ၊ ၂၀၁၉)
မွန်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးတွင် မေးမြန်းချက် အဖြေများကို အစိုးရအဖွဲ့က ကြိုတင်မပေးတော့
မွန်ပြည်နယ်လွှတ် တော် အထူးအစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မေးမြန်းသော မေးခွန်း၏ အဖြေ များကို အစိုးရအဖွဲ့ဘက်က ကြိုတင်ပေးထားခြင်း မရှိတော့ ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောကြားသည်။
မုံရွာမြို့ရှိ စတိုးဆိုင်များမှ ကျပ် ၁၀ သိန်းခန့် တန်ဖိုးရှိ တားမြစ်အလှကုန်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ
မုံရွာမြို့ရှိ စတိုးဆိုင်များမှ ကျပ် ၁၀ သိန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ တားမြစ် အလှကုန်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်း ရမိကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီး အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (FDA) တိုင်းဦးစီးမှူး ဒေါက်တာ ထွန်းလင်း အောင်က ပြောသည်။
ဒီပဲယင်းမြို့နယ် ဆည်မြောင်းတာပေါင်ပေါ်ရှိ သက်တမ်းရင့် ကုက္ကိုပင်များကို ခုတ်ယူခဲ့သူများအား အရေးယူမည်
ဒီပဲယင်းမြို့နယ် လက်လှုပ် ကျေးရွာ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ဆည်မြောင်း တာပေါင်ပေါ်ရှိ သက်တမ်းရင့် ကုက္ကိုပင်ကြီးများ ကို ခုတ်ယူခဲ့သူများအား အရေးယူ မည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေ သကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးကမ်ဇာမ
ပြည်တွင်းရွှေဈေး ကျပ်ဆယ်သိန်းရှစ်သောင်းငါးထောင်အထိ စံချိန်တင်မြင့်တက်
ပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်း သည် အခေါက်ရွှေတစ်ကျပ်သား လျှင် ကျပ်ဆယ်သိန်းရှစ်သောင်း ငါးထောင်သို့ ဇွန်လ ၁၄ ရက်က စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့သည်။
မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ရောင်းချသည့် ကျောက်မျက်ပွဲတွင် ကျပ်သန်း ၆၀,၀၀၀ ကျော်ဖိုး ရောင်းချခဲ့
နေပြည်တော်တွင်ခြောက်ရက်ကြာ ပြုလုပ်သည့်မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ရောင်းချသော ကျောက်မျက်ပြပွဲ၌ ကျောက် မျက်၊ ကျောက်စိမ်းနှစ်မျိုးပေါင်း မှ ကျပ်သန်း ၆၀,၀၀၀ ကျော်ဖိုး ရောင်းချခဲ့ရသည်ဟု ပြပွဲကျင်းပ ရေးကော်မတီက သတင်းထုတ် ပြန်သည်။
ပြောင်းလဲမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှုန်းထားခ လူတစ်ဦးချင်းစီ ၀င်ငွေအပေါ် အခြေခံတွက်ချက်ထား
လျှပ်စစ်ဓာတ် အားနှုန်းထား ပြောင်းလဲသတ်မှတ် ရာတွင် လူတန်းစားအလွှာပေါင်း စုံလူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ၀င်ငွေအပေါ် အခြေခံတွက်ချက်ထားပြီးထုတ် ပြန်ရန် အချိန်ကာလတစ်ခု စောင့်ဆိုင်း နေကြောင်း လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးစိုးမြင့်က ပြော
အမြန်လမ်းမကြီးပေါ် တွင် သံဆူးလိပ်ပစ်၍ သစ်မှောင် ခိုယာဉ် ဖမ်းဆီးသည့် သစ်တော ဝန်ထမ်းများကို သတိပေးခဲ့ ကြောင်း အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့က ယမန်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည်။ ဇွန်လ ၁၃ ရက် နံနက် ၆ နာရီခွဲခန့်တွင် အမြန်လမ်းမကြီး ပေါ် မောင်းနှင်နေသော ယာဉ် တစ်စီးအောက်သို့ ဆူးချွန်များပါ သစ်သားချောင်းပစ်သွင်းသည့် အရပ်ဝတ်လူတစ်စုကို တွေ့ရ ကြောင်း ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးက အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ထံ သတင်းပို့ တိုင်ကြားချက်အပေါ် စုံစမ်းရာ သစ်တောဝန်ထမ်းများက ဆောင် ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ဖော်ပြသည်။
GGS ကုမ္ပဏီ၏လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းစာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်း
အဂတိအမှုဖြင့် တရား စွဲခံနေရသော ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်နှင့် GGS ကုမ္ပဏီကြား ရှုပ်ထွေးမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ထားဝယ်ခရိုင် လျှပ် စစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစာချုပ် ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်ဟု တနင်္သာ ရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးအောင်သူရက ယမန်နေ့တွင် ပြောကြားသည်။
ဆာရီပြောင်းရွှေ့ရန် ဂျူဗင်တပ်နှင့်ချယ်လ်ဆီး သဘောတူညီမှုရရှိ
မော်ရီဇီယိုဆာရီ စီးရီးအေချန်ပီယံအသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ရေးချယ်လ်ဆီးအသင်းနှင့်မူအားဖြင့် သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်ဟု ဘီဘီစီနှင့် စကိုင်းအီတလီရုပ်သံတို့က ပြောကြားသည်။ ယင်းသဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကလပ်အသင်းနှစ်ခုစလုံးနှင့် ဆာရီထံမှ အတည်ပြု ချက်မရရှိသော်လည်းချယ်လ်ဆီး နှင့် ယူရိုပါလိဂ်ရရှိခဲ့သော ဆာရီသည်ဂျူဗင်တပ်နှင့်သုံးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
အွန်လိုင်းရုပ်သံအစီအစဉ်ကို ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် စတင်
ဘောလုံးပွဲများပြသ မည့်မိမိတို့၏ အွန်လိုင်းပလက် ဖောင်းအသစ်တွင် လာမည့်ရာသီ၌ ဂျာမနီလိဂ်ပွဲစဉ်များ ပြသမည်ဟု ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (UEFA)က ပြောသည်။ www.uefa.tv ဝက်ဘ်ဆိုက် သည် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲများ၏ အ ကောင်းဆုံးအပိုင်းများ ဖြတ် တောက်ပြသမှု အပါအဝင် တိုက် ရိုက်ပွဲစဉ်နှင့် ဗီဒီယိုများကို ပိုမို ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိစေမည်ဟု ယူအီး အက်ဖ်အေက ပြောသည်။
လူဦးရေအခြေပြုကင်ဆာရောဂါစာရင်း ယခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ရန်စီစဉ်
လူဦးရေအခြေပြုကင် ဆာရောဂါစာရင်းကောက်ယူမှု ရလဒ်များ ယခုနှစ်အတွင်း ထုတ် ပြန်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး ကင်ဆာရောဂါဆေး ပညာဌာန ပါမောက္ခဒေါက်တာ ခင်သင်းမူက ပြောသည်။
ဘရဂ်အသင်းမှ ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူး ဝက်စလေကို အက်စတွန်ဗီလာက ကလပ်စံချိန်တင်ကြေးဖြင့်ခေါ်ယူ
ဘယ်လ်ဂျီယံကလပ် ဘရဂ်မှ ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူး ဝက် စလေကို အက်စတွန်ဗီလာက ကလပ်စံချိန်တင်ကြေး ပေါင် ၂၂ သန်းဖြင့် ခေါ်ယူသည်။
ကြယ်စင်စုကစားသမား ဖြစ်လာရန် ကြိုးပမ်းမည်ဟု ဟာဇက်ပြောကြား
ဘာနေဗျူးကွင်း၌ ပရိသတ်ငါးသောင်းခန့် ရှေ့မှောက်တွင် တရားဝင်မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပစဉ် တိုက်စစ်မှူးဟာဇက်က ၎င်းအနေဖြင့်ကြယ်စင်စုကစား သမားတစ်ဦးဖြစ်လာရန် ကြိုးပမ်းမည်ဟုပြောသည်။
တောင်အာဖရိကကို အနိုင်ရခဲ့သော တရုတ် နောက်တစ်ဆင့်တက်ရေး စပိန်နှင့် အဆုံးအဖြတ်ကစားမည်
တောင်အာဖရိကကို ၁-၀ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရပြီးနောက် တရုတ်သည် အမျိုးသမီး ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ၌ လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ပြန်ရောက်လာပြီး အုပ်စု (B) တွင် ဒုတိယ နေရာအတွက် အပြိုင်ဖြစ်လာကာ နောက် တစ်ဆင့်တက်ရေး အာရုံစိုက်နေသည်။
. အေဂျက်ဇ်အသင်းခေါင်းဆောင် ဗဟိုနောက်ခံလူ ဒီလိုက် ပီအက်စ်ဂျီသို့ ပြောင်းရွှေ့ ရေးအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်သည်ဆိုသော သတင်းများကို ၎င်း၏အေးဂျင့် မီနီရီအိုလာက ပယ်ချသည်။ ရီအိုလာသည် အေးဂျင့်လုပ်ခွင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းပိတ်ပင်ခံ ထားရမှုကို အားကစား အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး တရားရုံးသို့ အယူခံဝင်ထားသည်။
အလီဘာဘာ မြန်မာပြည်ရုံးခွဲ ရန်ကုန်မြို့၌ ဖွင့်လှစ်ထား
တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် အလီဘာဘာ နိုင်ငံပေါင်းစုံလုပ် ငန်းအင်အားစု ကုမ္ပဏီအုပ်စု သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌eGovernment ၀န်ဆောင်မှု၊ Smart City ၀န်ဆောင်မှုနှင့် Cloud Service ၀န်ဆောင်မှုများ လုပ်ကိုင်ရန် ရန်ကုန်မြို့၌ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ဟု Whale Cloud နည်းပညာ ကုမ္ပဏီစီအီးအို (တောင်အာရှ) Mr.Louis Lu က ပြောသည်။
၂၀၁၉ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်များကို ဇူလိုင်လဆန်းတွင် ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ် ဦးစီးဌာနရုံးများ၌ ထုတ်ပေးမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသိန်းဇံက ပြောသည်။
အနှစ်မပါတဲ့ စကားလုံးတစ်ထောင်ထက် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖြစ်စေတဲ့ စကားတစ်ခွန်းက သာလွန်ကောင်းမွန်တယ်။- ဂေါတမဗုဒ္ဓ